मनोरंजन – Nep Stok
टिकटकमा भाइरल पुर्णिामा सर्किनी क्षेत्रीसँग पेसबुकमा लभ परी बिहे गरिन् (भिडियो सहित)झट्ट हेर्दा केटाको पहिरनमा केटा जस्तै देखिएतापनी उनी वास्तवमा केटी हुन्।र हाँस्दै मजाक गर्दै कसैले पनि मलाई झुक्किएर यस्तो कपाल र केटाको जस्तो गेट अप देखेर छक्का चाहिँ नभनीदिनुहोला भन्छिन्। उनको नाम हो पूर्णिमा शर्किनी,उनी भन्छिन्,”हाम्रो फेसबुकमा बोल्ने क्रममा लभ परेको यद्यपि हाम्रो समाज यस्तै छ,मलाई यतिबेला उहाँको परीवारबाट स्वीकार गर्नुभएको छैन। म पनि तपाईंहरू जस्तै हुँ,मलाई पनि तपाईंहरूकै छोरीकै रुपमा स्वीकार गरिदिनुहोला।मेरो पनि ममी हुनुहुन्न,राम्रो मनले बुहारी स्वीकार गरिदिनुहोला।भाग्यमा लेख्या कसले पो मेट्न सक्छ होला र ! म पनि राम्रो मनले ममीबाबा मान्छु हजुरहरू लाई।आफूले सकेसम्म राम्रो नै गर्ने कोसिस गर्नेछु भन्न चाहन्छु।” उनलाई सुजल जि एम ले जिस्कँदै सोध्छन्,”के तपाईं अन्दरसे नै महिला नै हो त
Mar132022 by NepstokNo Comments
काठमाडौँ । नेपाली अभिनेत्री सुहाना थापाले भगवान् कृष्णजस्तो ब्वाइफ्रेन्ड (केटा साथी) र भगवान् रामजस्तो हजबेन्ड (लोग्ने) चाहना रहेको बताएकी छन्। एपी वान टेलिभिजनको कार्यक्रम ‘ग्ल्यामर गफ’मा उनले सो कुरा खुलाएकी हुन्। भगवान् कृष्ण र राममध्ये कसलाई छान्नुहुन्छ? भन्ने कार्यक्रम प्रस्तोताको प्रश्नमा उनले ‘ब्वाइफ्रेन्ड कृष्णजस्तो हुनुपर्छ र हज्बेन्ड रामजस्तो हुनुपर्छ’ भनेकी थिइन्।‘कृष्ण चुलबुल छन्, मुरली बजाउने, रमाइलो गर्ने त्यसो हुँदा आफूलाई पनि चुलबुल हुन मन लाग्छ,’ अन्तर्वार्तामा उनले भनेकी छन्, ‘भगवान् राम चाहिँ अनुशासित, बुद्धिजीवी राजा भए।’ अभिनेत्री सुहाना थापाको दैनिकी बिहान साढे ४ बजे नै सुरू हुन्छ। हरेक दिन बिहान उनी एक घन्टा ध्यान र व्यायाम गर्छिन्। मनोविज्ञानकी विद्यार्थी उनी ध्यान र व्यायामले मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वस्थ बनाउने बताउँछिन्। अमेरिकाको नोभा कलेजबाट मनोविज्ञानमा
सुरक्षा पन्तलाई कसले फोन गरेर सोध्यो – तिम्रो एक रातको रेट कति हो ?
काठमाडौं । नायिका सुरक्षा पन्तले आफूमाथि भएका यौ’ ‘नज’न्य दु’व्र्य’वहा’रको विषयमा खुलेर बोलेकी छन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा उनले सानैदेखि दु’व्र्य’व’हा’रको शि’कार बनेको र चलचित्र क्षेत्रमा आएपछि समेत त्यो जारी रहेको बताइन् । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा सुरक्षाले भनिन्, ‘हामी पनि सानैदेखि ह्या’रेस’मे’न्टको पार्ट भइरहेकै हो । सानोतिनो घटना भइरहेका हुन्छन् ।’ उनले एउटा घटना सुनाइन्, ‘अलि सानो छँदा बाटोमा हिँडिरहेको थिएँ । बाइकमा आएका दुईजना केटाले मेरो छातिमा हात राखेर स्वाट्ट भागे ।’ सुरक्षाले आफ्ना सिनियर दाइहरुले पाठ सिकाउने बहानामा नजिक हुन खोजेकोदेखि कक्षाकोठामा शिक्षकबाट ‘ब्याड टच’ को शि’कार भएका अनुभवहरु सेयर गरिन् । सिनेमा क्षेत्रमा आउँदा पनि विभिन्न किसिमले दु’व्र्य’वहा’र भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । ‘सुरु–सुरुमा मलाई अपरिचित नम्बरबाट धेरै फोन आउँथे । अनि डाइरेक्ट तिम्रो ‘रेट’
यी १५ कलाकार, जसले दोस्रो बिवाह गरे
अभिनेत्री रेखा थापाले दोस्रो विवाह गरेकी छिन् । बलराम शाही ठकुरीसँग दुई साता अगाडि कोर्ट म्यारिज गरे पनि उनले विवाहको कुरा गोप्य राख्दै आएकी थिइन् । सोमबार भने उनको विवाह मिडियामार्फत् सार्वजनिक भएको छ । निर्माता छविराज ओझासँग छुट्टिएको लामो समयपछि रेखाले ठकुरीलाई जीवनसाथी रोजेकी हुन् । रेखा पछिल्लो समय राजनीतिक दलको नेतृको रुपमा चिनिएकी छन् । हालै राप्रपाको महाधिवेशनमा महामन्त्री उम्मेदवार भएकी उनी कुन्ती शाहीसँग पराजित भएकी थिइन् । नेपाली समाजमा पहिले एकपटक विवाह गरेपछि वा श्रीमान्को निधनपछि एकल महिलाको रुपमा जीवन व्यतित गर्ने चलन रहिआएको थियो । कतिपय अवस्थामा श्रीमतीको निधनपछि पुरुषले पनि एकल जीवन निर्वाह गरेको देख्न सकिन्थ्यो । पछिल्लो समय भने श्रीमान् वा श्रीमतीको निधनपछि या पहिलो विवाह असफल भएर डिभोर्स भएपछि महिला, पुरुष एकल बस्ने चलन बिस्तारै हराउँदै गएको छ । नेपाली कला क्षेत्
‘गाला रातै’ गाइरहँदा मिलन अमात्य नेपाली पार्श्व गायनको शीर्ष स्थानमा थिइन् । उनको उदय त्यही मोडमा भएको थियो, जतिबेला पारिवारिक झमेलाका कारण अर्की गायिका अन्जु पन्त सुस्ताएकी थिइन् । भन्नेहरु भन्थे, ‘मिलनले अन्जुको ठाउँ खोस्यो ।’ मिलन भने कसैको ठाउँ ओगट्ने नभई आफ्नो पहिचान स्थापित गर्न लागिपरेको बताउँथिन् । जे भएपनि, त्यो उनको समय थियो । पार्श्व गायनमा एकछत्र राज थियो । सफलाको ग्राफ सधैं एकनाश उकालो लाग्दैन । चर्चा र सफलताको उत्कर्षमा पुग्दै गर्दा मिलन अमात्यको गति एकाएक धिमा भयो । उनको सांगीतिक जीवन धर्मरायो । अनि पालो आयो, मेलिना राईको । गीत रेकर्ड गर्दैमा र स्टेज कार्यक्रम पाएकै भरमा सफल मान्नु गलत भएको स्वीकार गर्छिन् उनी । ‘दर्शकश्रोताले मिलन तैंले राम्रो गीत गरिस् भन्नुभयो भने म सफल हो,’ मिलन भन्छिन्, ‘नभए, सफल भएँ भन्नु भ्रममा रमाउनु मात्र हो ।’ २०७४ साल असोज २ गते । गायि
पलले खेल्ने भनिएको फिल्ममा सौगातले खेल्न सक्ने
काठमाडौं – नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका अभिनेता पल शाह अहिले प्रहरीको हिरासतमा छन् । प्रहरि हिरासतमा रहेपछि उनी खेल्ने भनिएको फिल्म पनि अन्यौलमा छ । दीपेन्द्र लामाले निर्देशन गर्ने भनिएको फिल्म २ नम्बरी मा पलल अभिनय गर्ने भनिएको थियो । तर उनी समस्यामा परेपछि फिल्मको छायाँकन अन्योलमा रहेको छ । अब भने पलले अभिनय गर्ने भनिएको यस फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्ललाई खेलाउने तयारी गरिएको छ । निर्देशक लामाले फिल्मको लागि अभिनेता मल्ल सँग कुरा पनि गरिसकेको बताइएको छ । फिल्मको छायाँकन चैतको पहिलो सातादेखि कास्कीको ल्वाङघलेबाट शुरु गर्ने बताइएको छ । फिल्ममा अभिनेता दयाहाङ राई, वर्षा राउत, भुटानी अभिनेत्री उँगेन छोदनको पनि मूख्य अभिनय रहनेछ ।
काठमाडौं : म यस्तो गीत गाउँछु २ ले राम्रो ब्यापार गरे संगै नायिका तथा निर्मात्री पुजा शर्मा खुशीले फुरुंग छिन् । फिल्मका नायक पल शाह ब’ला’त्कार केसमा तानिएको यो कठिन परिस्थितीमा उनको फिल्मले बक्स अफिसमा राम्रै कमाई गरिरहेको छ । सबै तिर खुशीयाली आए संगै नायिका पुजा शर्माले लामो समय देखी लुकाएर राखेकी आफ्नो प्रेमी पनि सार्वजनिक गरेकी छिन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा प्रेमी यु’द्ध बानियाँसँगका तस्बिरहरू सेयर गर्दै उनले प्रेमबारे खुलासा गरेकी हुन् । यसअघि पनि यो जोडीको चर्चा चले पनि आधिकारीक रुपमा सम्बन्ध बारे केही बोलेका थिएनन् । उनले करिब एक वर्षदेखि युद्ध संगको प्रेमलाई अगाडि बढाइरहेकी छिन् । पछिल्लो समय फिल्मको हरेक शो हरुमा युद्ध पुजा संग संगै देखिने गरेका छन् । अब यो प्रेमिल जोडीले आफ्नो फक्रिएको प्रेमलाई विवाहमा परिणत गर्ने योजना बनाएका छन् । युद्ध बानियाँ हेटौंडाका निर्माण व्याव
काठमाडौं / अभिनेता सौगात मल्ल र अभिनेत्री सृष्टि श्रेष्ठबीचको प्रेमसम्बन्ध लामोसमयदेखि चर्चामा छ । उनीहरुले हरेक अन्तवार्तामा आफूहरुको प्रेमसम्बन्धबारे खुलेर भन्ने पनि गरेका छन् । तर अब भने उनीहरुले विवाह गर्न लागेको चर्चा पनि चलको छ । आफ्नो विवाह बारे पूर्वमिस नेपाल समेत रहेकी श्रेष्ठले हालै खुलाएकी छिन् । उनले आउँदो बर्ष विवाह गर्ने योजना रहेको बताएकी छिन् । उनले सैगातसँगको प्रेमसम्बन्धलाई घरकै सहमतीमा विवाहमा परिणत गर्न लागेको बताइएको छ । सौगात र सृष्टि केही फिल्ममा सँगै काम गरेका छन् । अन्य समाचार / काठमाडौं, २२ फागुन । सरकारले युट्युव च्यानलका अलावा इन्टरनेटबाट प्रसारण हुने कुनैपनि च्यानलको इजाजतपत्र अनिवार्य गरेको छ । ￼ अनलाइन टेलिभिजनका रुपमा परिभाषित गरी इजाजतका लागि ५ लाख रुपैयाँ लाग्ने समेत उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीमा ११औं संशोधनमार्फत् अनिवार्य गरेको
काठमाडौं : चलचित्र बजार गसिपको क्षेत्र हो । पर्दा अगाडि देखिने कलाकारको विषयमा दैनिक रुपमा आउने गसिप कहिलेकाहीं उनीहरुका लागि चर्चाको राम्रै खुराक बन्छ भने कहिलेकाहीं टाउको दुखाइको विषय । अझ एउटै चलचित्रमा काम गर्ने नायक र नायिकाको प्रेम सम्बन्धको खबर त हलिउड, बलिउड या कलिउड सबैतिर पेज थ्रीको मुख्य आकर्षण बन्ने गर्दछ । नायिका पूजा शर्मा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेसँगै फिल्मी गसिपको मुख्य केन्द्रमा छिन् । चलचित्रको पर्दामा उनी जोसँग काम गर्छिन्, उनै नायकसँग उनको नाम जोडिन्छ । तर, चलचित्र रिलिज भएपछि पूजाको यस्तो चर्चा टाढा हुन्छ । सुदर्शन थापा, प्रदीप खड्का, पल शाहदेखि आकाश श्रेष्ठसँगका पेज थ्रीका गसिपमा पूजा शर्मा लामै समय हेडलाइन बनेकी छिन् । उनै पूजा विगत केही दिनदेखि फेरि चर्चामा छिन् । पूजा शर्मा र वि’वाद एकअर्काका पर्याय जस्तै हुन् । पूजा जे बोल्छिन्, वि’वाद नै हुन्छ । घाँटी
गोल्डीले आफ्नी श्रीमती सिलुलाई अर्कै केटा संग ओछ्यानमा देखेपछि भयो यस्तो लफडा (भिडियो हेर्नुस्).
गोल्डीले आफ्नी श्रीमती सिलुलाई अर्कै केटा संग ओछ्यानमा देखेपछि भयो यस्तो लफडा (भिडियो हेर्नुस्) पछिल्लो समय नेपाली रियालिटी शोमा नयापनका साथ प्रस्तुत भएको अर्को नयाँ रियालिटी शो “ब्लाईन्ड डेट” । ब्लाईन्ड डेट पहिलो सिजनमा नै हिट बन्न सफल बन्यो । तर यो टेलिभिजनबाट प्रशारण हुन सकेको थिएन । अब भने युट्युवमा हिट भएपछि ‘ब्लाइन्ड डेट’को सिजन २ टेलिभिजनमा प्रसारण हुने भएको छ । बैशाख पहिलो सातादेखि प्रसारण आरम्भ गर्ने गरि हिमालय टिभीले सोको प्रसारण अधिकार लिएको छ । सिलु पोखरेल र किरण खाती गोल्डी पहिलो सिजनबाट विजेता भएर बिहे समेत गरेका थिए । त्यसपछी यो जोडी निकै चर्चित बनेका छन् । चर्चा र सफलता सङै गोल्डी र सिलुले दर्शकहरु माझ सिलुको आफ्नै युट्युव च्यानल मार्फत विभिन्न मनोरंजनात्मक भिडियोहरु शेयर गर्ने गरेका छन् । विभिन्न सेलिब्रेटीहरु संगको भेटघाट, प्र्यान्क तथा भ्लगहरु बनाउदै आएका यो